PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - ABAZALI BAJABULELA UKUFAKWA KWAMAKILASI
ABAZALI BAJABULELA UKUFAKWA KWAMAKILASI
Ilanga - 2018-10-29 - Izindaba - PAMELA ZUNGU
KUBE yinjabulo yodwa kubazali babafundi baseMalahleni Primary School, eMnambithi, kufakwa amagumbi angomahamba nendlwana kulesi sikole esikhahlanyezwe yisivunguvungu esihambisana nemvula nokuduma kwezulu ngoMasingana (January) nonyaka.
ILANGA like labika ngodaba lwalesi sikole njengoba kuze kwaphoqeleka ukuba abafundi baduve emakhaya. Leli phephandaba lithole ukuthi la magumbi aqedwe ukufakwa emasontweni amathathu edlule.
UNkz Thandeka Mhlongo, ongumzali womfundi kulesi sikole, utshele ILANGA ukuthi bengabazali bajabulile ukuthi la magumbi agcine efakiwe.
Uthi abafundi bese bephoqeleka ukufundela emnyango ngenxa yokuthi bebempintshana emagunjini ngenxa yokuthi amanye abengekho esimeni esihle. “Sibonga umnyango wezemfundo ongenelele kule nkinga waletha la magumbi.
"Uthishanhloko nesigungu esilawula isikole, bebesebenza ngokubambisana ekutheni la magumbi afakwe ngokuphuthuma ngoba abafundi bebehlala emakhaya uma kumakhaza noma izulu lina. Lokho bekwenza ukuba basale ezifundweni.
"Ngenxa yamakhaza nokuthi isikole kasinalo uphahla namawindi, kuke kwaphoqeleka ukuba abafundi bangabe besangena ngesikhathi sesikole esijwayekile, okuwu-07:45, bese bengena ngo08:30 sekwehle amakhaza,” kusho uNkz Mhlongo.
UNkk Buhle Sibeko naye ongumzali womfundi wakulesi sikole, uthe ujabule ngendlela eyisimanga. “Siyabonga ukuthi ukukhala kwethu kuzwakele.
"Besiphatheka kabuhlungu uma izulu lina noma kumakhaza ngoba izingane bezingayi esikoleni. Siyethemba ukuthi la magumbi azoziphatha kahle izingane zethu,” kusho uNkk Sibeko.
Usihlalo wesigungu esilawula isikole, uMnu Thulani Kheswa, uthe awu-8 amakilasi afakiwe. “Siyabonga emnyangweni ngokusifakela la magumbi. Siyethemba ukuthi angawesikhashana njengoba silinde ukuba isikole siqale silungiswe,” kusho uMnu Kheswa.
Okhulumela uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe: “Umnyango uthembisile ukuthi uzokwenza okufanele ukuze kungabikhona umfundi ohlala ekhaya noma ofundela emnyango ngenxa yesimo sesikole. Njengoba kufakwe la magumbi, lokho kukhombisa ukuthi uyazilalela izikhalo bese uyaphendula. Uyathembisa ukuthi isikole sizolungiswa.”
AMAGUMBI angomahambanendlwana afakwe eMalahleni Primary School.